Pini Yakuel's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone »
Zvinyorwa na Pini Yakuel
Pini Yakuel, muvambi uye CEO we Optimove, bhizinesi rinobatsira uye rinokurumidza-kukura, rine makore anopfuura gumi echiitiko mukushambadzira kwevatengi kunoongorora-kunotungamirwa, kubvunza bhizinesi nekutengesa. Chido chake chekunzwisisa chinotungamira maitiro evatengi chakamutungamira kuti atungamire kuvandudzwa kweOptimove, indasitiri inotungamira yeVatengi Yekushambadzira Cloud, ichipa simba vashambadzi kuti vawedzere kukosha kwevatengi vavo. Optimove inoshandiswa nemabhizimusi zana nemakumi masere, kusanganisira Zynga, maKesari Anopindirana, Lucky Vitamin, uye Outbrain.
Kubva paMunhu kuita High-Tsananguro Emotional Intelligence
Chitatu, Kukadzi 3, 2016 Chipiri, February 2, 2016 Pini Yakuel
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Vanhu vane hushamwari hwepamoyo (EQ) vanofarirwa, vanoratidza kushanda kwakasimba uye kazhinji vanobudirira. Ivo vane simba uye vane hunyanzvi hwehukama: vanoratidza kuziva kwemanzwiro evamwe uye vanoratidza kuziva uku mumashoko nezviito zvavo. Vanogona kuwana nzvimbo yavanowirirana nevanhu vakasiyana siyana uye nekurera hukama hunodarika hushamwari chete uye kugona kuwirirana. Ivo vanozviita izvi nekucherechedza uye kuongorora